Kiisas badan oo Coronavirus oo Soomaaliya laga helay iyo wararkii ugu dambeeyey | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Kiisas badan oo Coronavirus oo Soomaaliya laga helay iyo wararkii ugu dambeeyey
Kiisas badan oo Coronavirus oo Soomaaliya laga helay iyo wararkii ugu dambeeyey
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinteeda maalin laha ah galabta ku shaacisay kiisas cusub oo cudurka Coronavirus ah.
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay 35 xaaladood oo COVID-19 ah.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in hal ruux uu u geeriyooday, 3 qofood oo kalana ay ka bogsoodeen, iyo in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobalka Banaadir 24 Somaliland 8 iyo Puntiland 3.
Bukaannda cusub 25 kamid waa rag 10-ka kalana waa haween. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 1,089 xaaladood, 52 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka, waxaana bogsootay 121 ruux.
Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay qaataan talooyinka caafimaad ayna ku dhaqmaan tillaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19, si guul looga gaaro dadaallada sare loogu qaadayo bed-qabka bulshada.